I-China yenze i-Draft ye-Cross-flow Towers yokuvelisa amandla, i-HVAC enkulu kunye neziXhobo zeMizi-mveliso kunye noMthengisi | Yubing
Uyilo olwenziweyo loNqamlezo lweeTower zokuPhehlwa kwaMandla, i-HVAC enkulu kunye nezixhobo zeMizi-mveliso
Olu ludwe lwephondo lweenqaba eziphosakeleyo ziyilelwe uyilo, iinqaba zokuhamba zinqamleze kwaye zilungiselelwe ngokweemfuno zabathengi ekusebenzeni, kulwakhiwo, ukukhukuliseka, ukusetyenziswa kwamandla, intloko yempompo kunye neendleko ekujoliswe kuzo.
Zikulungele ngokukodwa ukusetyenziswa okunzima kwemizi-mveliso kwizityalo zamandla, izityalo zezichumiso, izakhiwo zepetrochemical kunye nokucocwa kwepetroleum kwaye uninzi lweenqaba ezitsha zakhiwe ngefilabhasi yomlilo etshabalalisayo ngenxa yamandla ayo aphezulu kunye nomlilo / umhlwa iipropathi ezichasayo.
Uluhlu olwahluka-hlukeneyo ngokuqwalaselwa kwesicelo esahlukileyo sobeko. I-in-line tower sisakhiwo esisezantsi sezizathu zokusebenza, kodwa ngokuhambelana kumgca, ukubuyela umva, kunye nolungelelwaniso olujikelezayo lukhetho xa isicwangciso sebali sifuna indlela eyahlukileyo.
Ukucwangciswa okujikelezileyo kunokuba sisisombululo esifanelekileyo sendawo enqunyelweyo.
Ukwakha inqaba ngendlela emgceni kubonelela ngokusetyenziswa kwamandla amancinci, kubandakanya ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwe fan kunye nentloko yokumpompa esezantsi. Thatha ingqalelo yokungena komoya okungena kakuhle, ukuphakama kwenqaba kunye neendleko kuncitshisiwe.
Uqwalaselo lwasemva ukuya ngasemva
Ukucwangciswa kwenqaba yokubuyela umva kunokulingana ngaphakathi kwemida yesiza xa kungenakwenzeka kulungelelwaniso lomgca. Xa kuthelekiswa nolungelelwaniso lomgama, amandla fan kunye nokupompa kwentloko zombini zonyukile eziya kuthi zikhokelele kwiindleko eziphezulu kodwa zisebenze ngokugqibeleleyo.
Ukucwangciswa komgca ofanayo
Ukuba akunakwenzeka ukubeka iitora kumgca omnye, kulungile ukwahlulahlula kunye nokucwangcisa iinqaba zibe ziiyunithi ezimbini okanye ezingaphezulu ezilungiselelwe kulungelelwaniso lomgca ngokuhambelana nokujonga la manqaku alandelayo:
Iya kunciphisa kakhulu inqaba yokupompa intloko ngokwahlula indawo yokungena komoya phakathi kobuso beenqaba ezimbini.
Inokunciphisa iindleko zeenqaba ezenziwe ukuba zinciphise ukuphakama kwenqaba kwaye zifumane ukusebenza kakuhle.
Iyanciphisa amandla ombane ngokufumana kwakhona ukusebenza ngokulahlekileyo ngokungena komoya kabini.
Iyanciphisa ubude obufakelweyo kusetyenziswa indawo phakathi kweenqaba kwimingxunya yokumpompa, imibhobho, kunye nokufikelela.
Amandla ethembekileyo ethembekileyo okusika umoya ngokutsala amanzi awayo ngesiqingatha.
Ukugcinwa ngokulula kunye nokusebenza okuhleliweyo ngokunika indawo iitora ezizimeleyo
Egqithileyo Inkqubo yokuCocwa kwaManzi ye-ICE yokuPholisa iNqaba yaManzi
Okulandelayo: Uhlobo lwebhotile ejikelezileyo Ukuphikisana nokuhamba kokupholisa iiTowers
Intsimi eyakhiwe kwinqaba yokupholisa
Ukupholisa inqaba yokuvelisa umbane